प्रचण्डले बुझाए चुनावी खर्च, कति भयो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्डले बुझाए चुनावी खर्च, कति भयो ?
प्रचण्डले बुझाए चुनावी खर्च, कति भयो ?
माघ १ गते, २०७४ - ११:०९
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो निर्वाचन खर्च बिवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् । सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनमा उक्त बिवरण बुझाएका हुन् ।
तर प्रचण्डको चुनावी खर्च अरुले सोचेभन्दा निकै कम छ । प्रचण्डको चुनावी खर्च सुन्दा तपाइँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर बास्तविकता भने यहि हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ताका पुत्र वियोगमा रहेका प्रचण्डले यो पटक कम खर्च गरेरै चुनाव जिते । चितवन बारका अध्यक्ष गाेपी देवकोटाले खबरडबलीलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रचण्डको चुनावी खर्च जम्मा ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भएको छ ।
माघ १ गते, २०७४ - ११:०९ मा प्रकाशित